Katyn fanaterana any Moskoa - Mametraha voninkazo
Fanaterana ~ 2h. 30 minitra., maimaim-poana any Moskoa
Fehezam-boninkazo vaovao miditra ao amin'ny salon-nao, dia hidina avy hatrany ao amin'ny tontolon'ny hatsarana sy ny hanitra avy amin'ny voninkazo voapaika ianao. Ny voninkazo ho an'ny fehezam-boninkazo na firafitra dia voafantina tsirairay isaky ny mpitsidika. Ny fehezam-boninkazo avy amin'ny Harmony dia manana hanitra tsy mampino foana, miavaka izy ireo! Ny fehezam-boninkazo, nadika avy amin'ny teny frantsay, dia "fehezam-boninkazo mifatotra kofehy." Florists Harmony: nametraka ny fanahin'izy ireo tamin'ny famoronana firaketana na fehezam-boninkazo ny salon anay. Ny loko dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famoronana fehezam-boninkazo mirindra. Ny fehezam-boninkazo dia sary miovaova amin'ny voninkazo na voninkazo maro mitovy karazana.
Hahavony 45 cm
10 hevitra momba ny asan'ny florist:
Igor sy Sveta 03-05-2020
Amin'ny andro sarotra fitokana-monina coronavirus, safidy tsara ho an'ny fiarahabana ireo namana tamin'ny tsingerintaona nahaterahany. Misaotra anao!!!
Fanaterana haingana sy ara-potoana! Ny voninkazo dia vaovao, feno fonosana. Voninkazo maro karazana amin'ny fotoana sarotra ahitana voninkazo. Misaotra indrindra anao!!!
Misaotra fa tsara sy ara-potoana ny zava-drehetra
Fandefasana fehezam-boninkazo Super Duper ara-potoana !!!!!!! Misaotra anao indrindra!!!!!!!
Nandidy ny vadiko aho mba ho tiany ny zava-drehetra, na ny frezy aza dia mamy. Ny zavatra tokana dia mety raha toa ka mivantana ny fifandraisana amin'ny mpandefa iraka mba hazavaina ny ora hahatongavan'izy ireo raha tsy izany milamina ny zava-drehetra. Nanafatra tamin'ny 18:00, nitondra avy hatrany tamin'ny 22:00.
Misaotra indrindra anao! Faly ilay zazavavy tsingerintaona nahaterahana! Izahay koa. Misaotra anao indrindra! Ny zava-drehetra dia tena marina, ara-potoana ary, mazava ho azy, tsara tarehy. Manoro hevitra ny rehetra aho!
Nandritra ny fotoana ela dia tsy afaka nanapa-kevitra ny fehezam-boninkazo voafidy ho an'ny reniko aho amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Nanampy tamin'ny safidy ilay mpandraharaha, faly izahay sy ny reniko.
Te hanome fanomezana ho an'ny vadiko aho ary hanafatra fehezam-boninkazo raozy fotsy mahafinaritra. Vita sy namboarina tonga lafatra ny zava-drehetra, faly aho.
Ilay lehilahy malala kosa dia nanolotra raozy 101 tamin'ny 14 Febroary. Ary rehefa tonga izy dia nanolotra sosokevitra ahy. Taorian'ny fehezam-boninkazo toy izany dia tsy afaka nandà aho.
Serivisy fanaterana voninkazo mahafinaritra! Tsy mila miandry ela intsony ianao fa azoko amin'ny fe-potoana tena tsara ireo fehezam-boninkazo. Raha misy fialantsasatra, dia eto dia manafatra raozy aho.